Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba Eziphambili ZaseSri Lanka » Ukhenketho Lwezilwanyana Zasendle: Imfuneko Yamabali Amibalabala
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Icandelo lokungenisa izihambi • iindaba • Iindaba Eziphambili ZaseSri Lanka • Tourism • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku
by I-Srilal Miththapala-eTN eSri Lanka
Ukhenketho Lwezilwanyana Zasendle
Ibhalwe ngu I-Srilal Miththapala-eTN eSri Lanka
Abathathi-nxaxheba ababandakanyekayo ekuthengiseni ukhenketho lwaseSri Lanka kufuneka benze amabali anemibala yamava ezilwanyana zasendle eSri Lanka, endaweni yokubonisa iinyani ezisisiseko kunye namanani. Into efunekayo kukudala kunye nokuxelela amabali ezilwanyana zasendle ngokuchukumisa ubuntu.
Xa umkhenkethi onokubakho efowunela ihotele okanye iarhente yokuhamba ukuze ibuze malunga nezinto ezinomtsalane zezilwanyana zasendle eSri Lanka, amaxesha amaninzi abasebenzi bezentengiso banika nje uhambo baze bakhankanye izilwanyana ezinokubonwa, endaweni yokubonisa izilwanyana zasendle ngendlela enomtsalane.
Oku kuya kufuna ukuba iingcali zokhenketho zecandelo labucala zibe namava aphezulu kunye nomdla kwizilwanyana zasendle, kwaye umyalezo kufuneka uhle uye kubasebenzi abanxibelelana nabakhenkethi. Ngeli xesha, uninzi lweehotele ngoku zineengcali zendalo kwimivuzo yazo, kwaye ezo hotele kufuneka zibakhuthaze ukuba bazibandakanye ekudaleni amabali abakhenkethi ukonwabela izilwanyana zasendle ezikule ndawo.
Ukutyhubela iminyaka, bendibonisa amabali amaninzi ezilwanyana zasendle ezinomdla. Phakathi kwezinye ezininzi, ndibhale kakhulu:
• I-Rambo indlovu yasendle ejikeleza i-Uda Walawe National Park.
• Ongasekhoyo kunye no-Walawe Raja omkhulu, ukumkani ongenakuphikiswa wase-Uda Walawe amashumi eminyaka.
• UGemunu, indlovu yasendle ekhohlakeleyo yaseYala National Park, egqogqa izithuthi zabatyeleli ukuze ifumane ukutya.
• UHamu no-Ivan, amahlosi asele ekhulile, akrelekrele ezitalatweni, (eyabangasekhoyo kamva) nawo aseYala National Park.
• UNatta, ihlosi eliyindoda elidumileyo, kunye nentshontsho elinguCleo, ihlosi lemazi esele likhulile, laseWilpattu National Park.
• UTimothy noTabitha, ii-2 semi-tame giant giant squirrels eSeenuggala Bungalow ngaphakathi kwe-Uda Walawe Park.
Ndikhuphe i-antics yabo kwaye ndakha abalinganiswa malunga nabo. Kwaye andixolisi “ngokubenzela ubuntu”. Yiloo nto eyenza ukuba konke kube nomdla ngakumbi ebantwini. Kutshanje ndithathe ibali lengwenya ehlala, uVilly eJet Wing Vil Uyana Hotel, ndalijikeleza lonke ibali.
IAfrika inokuba nayo “Abakhulu abahlanu” izilwanyana, kodwa sikwanazo ezethu izilwanyana ezanyisayo “eZine Ezikhulu” – umnenga oluhlaza, indlovu, ingwe, kunye nebhere i-sloth. Abanye oogxa bam bathetha nge "Big Five" yethu, besongeza i-sperm whale nakolu luhlu, kodwa andivumelani nokuba neentlobo ezimbini zeentlobo ezifanayo kuluhlu.
ISri Lanka iphantse ibe yi-30% yohlobo oluthile lwekhava eluhlaza, ngaphezu kwezityalo ezingama-3,000, kunye neentlobo zezilwanyana ezingaphezu kwe-1,000. Ngoko ngokuqinisekileyo asinakunqongophala kokulungileyo ukhenketho lwezilwanyana zasendle imathiriyeli yokuthengisa. Ke ndiyazibuza ukuba iSri Lanka ifuna ngenene amanani aphezulu abakhenkethi, okanye ngaba kufuneka silandele isicwangciso esahlukileyo somgangatho ngaphezulu kobuninzi?
I-Sri Lanka yamkele abakhenkethi abazizigidi ezi-2.3 ngo-2018 bafumana i-US $ 4.4 yezigidigidi kwingeniso. U-2018 yeyona meko isisiseko, kuba ngo-2019 saba nohlaselo lwabanqolobi, kwaye emva koko saba nobhubhani we-COVID. Ukhenketho lwezilwanyana zasendle licandelo elikhula ngokuthe ngcembe kwaye iWikipedia ithi ukhenketho lwezilwanyana zasendle ngoku luqeshe abantu abazizigidi ezingama-22 kwihlabathi liphela ngokuthe ngqo okanye ngokungathanga ngqo kwaye lunegalelo elingaphezulu kweebhiliyoni zeedola ezili-120 kwi-GDP yehlabathi.
KwanaseSri Lanka, siye sabona ukwanda okumangalisayo kweli candelo. Ngo-2018 phantse i-50% yabo bonke abakhenkethi kwilizwe batyelela ubuncinane enye yeepaki zezilwanyana zasendle, ukusuka kwi-38% ngo-2015. ISebe lezoLondolozo lwezilwanyana zasendle lifumene i-Rs 2.1 yezigidigidi kwi-2018 kwiintengiso zamatikiti angaphandle.
Kufuneka kugxininiswe, nangona kunjalo, ukuba imboni yezokhenketho kufuneka isebenze njengomgcini wezinto ezikhangayo zezilwanyana zasendle eSri Lanka endaweni yokubangela ukuthotywa kwazo, malunga nokuba icandelo labucala kufuneka liqaphele kwaye linoxanduva malunga.
I-Srilal Miththapala-eTN eSri Lanka